Luka 17 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Luka Asɛmpa 17:1-37
Hintidua, bɔnefakyɛ, ne gyidi (1-6)
Nkoa a mfaso nni yɛn so (7-10)
Ɔsaa akwatafo du yare (11-19)
Onyankopɔn Ahenni reba (20-37)
Onyankopɔn Ahenni “wɔ mo mfinimfini” (21)
“Monkae Lot yere no” (32)
17 Afei ɔka kyerɛɛ n’asuafo no sɛ: “Nea ɛbɛyɛ biara, nneɛma a ɛto nnipa hintidua bɛba. Nanso, nea ɛnam no so bɛba no nnue! 2 Anka eye ma no sɛ wɔde ɔbo kɛse* bɛsɛn ne kɔn mu, na wɔakɔtow no ato po mu, sen sɛ ɔbɛto nketewa yi mu baako hintidua.+ 3 Monhwɛ mo ho yiye. Sɛ wo nua yɛ bɔne bi a, ka n’anim,+ na sɛ onu ne ho a, fa kyɛ no.+ 4 Sɛ mpo ɔyɛ wo bɔne mpɛn ason da koro, na ɔsan ba wo nkyɛn mpɛn ason bɛka sɛ, ‘Manu me ho’ a, fa kyɛ no.”+ 5 Na asomafo no ka kyerɛɛ Awurade sɛ: “Ma yɛn gyidi nyɛ kɛse.”+ 6 Ɛnna Awurade kae sɛ: “Sɛ mowɔ gyidi a ne kɛse te sɛ sinapi aba a, anka mobɛka akyerɛ saa dua* yi sɛ, ‘Tutu na kosi po mu!’ na ebetie mo.+ 7 “Mo mu hena na ɔwɔ akoa a ɔrefuntum asaase anaasɛ ɔrehwɛ mmoa, na sɛ ofi afuw mu ba a ɔbɛka akyerɛ no sɛ, ‘Yɛ ntɛm bra bɛtena pon ho didi’? 8 Mmom no, ɔbɛka akyerɛ no sɛ, ‘Pɛ biribi ma minni anwummere yi, na bɔ abɔso som me kosi sɛ medidi anom awie, na ɛno akyi no, wubetumi adidi anom,’ ɛnte saa? 9 Ɔbɛda akoa no ase sɛ wayɛ nea ɔkae no anaa? Daabi. 10 Enti mo nso, sɛ moyɛ adwuma a wɔde ama mo no nyinaa wie a, monka sɛ: ‘Yɛyɛ nkoa a mfaso nni yɛn so. Nea ɛsɛ sɛ yɛyɛ ara na yɛayɛ no.’”+ 11 Bere a ɔrekɔ Yerusalem no, ɔfaa Samaria ne Galilea hye so. 12 Na bere a ɔreyɛ adu akuraa bi ase no, mmarima du bi a wɔyare kwata huu no, nanso wogyinaa akyirikyiri.+ 13 Na wɔteɛɛm sɛ: “Yesu, Ɔkyerɛkyerɛfo, hu yɛn mmɔbɔ!” 14 Bere a ohuu wɔn no, ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Monkɔ na momfa mo ho nkɔkyerɛ asɔfo no.”+ Na bere a wɔrekɔ no, wɔn ho tɔɔ wɔn.*+ 15 Bere a baako hui sɛ ne ho atɔ no no, ɔsan n’akyi bae, na ɔde nne kɛse hyɛɛ Onyankopɔn anuonyam. 16 Na ɔde n’anim butuw Yesu nan ase daa no ase. Nea ɛte ne sɛ, na ɔyɛ Samariani.+ 17 Ɛnna Yesu bisaa no sɛ: “Ɛnyɛ nnipa du na wɔn ho tɔɔ wɔn?* Na baakron a aka no wɔ he? 18 Enti obi foforo biara ansan n’akyi ammɛhyɛ Onyankopɔn anuonyam sɛ ɔbarima a ofi ɔman foforo mu yi?” 19 Ɛnna Yesu ka kyerɛɛ no sɛ: “Sɔre na kɔ; wo gyidi ama wo ho atɔ wo.”+ 20 Na Farisifo no bisaa no bere a Onyankopɔn Ahenni bɛba.+ Na obuaa wɔn sɛ: “Onyankopɔn Ahenni no remma mma nnipa mfa wɔn ani nhu no pefee; 21 na nnipa renka nso sɛ ‘Hwɛ ha!’ anaa ‘Hwɛ hɔ!’ Na hwɛ! Onyankopɔn Ahenni no wɔ mo mfinimfini.”*+ 22 Afei ɔka kyerɛɛ asuafo no sɛ: “Bere bi bɛba a mobɛpɛ sɛ muhu onipa Ba no nna no mu baako, nanso morenhu. 23 Na nnipa bɛka akyerɛ mo sɛ, ‘Monhwɛ hɔ!’ anaasɛ ‘Monhwɛ ha!’ Monnkɔ, na munnni wɔn akyi.+ 24 Na sɛnea anyinam pae a, ɛhyerɛn fi ɔsoro fã bi kɔ ɔsoro fã foforo no, saa ara na onipa Ba+ no bɛyɛ wɔ ne da no mu.+ 25 Nanso nea edi kan no, ɛsɛ sɛ ohu amane bebree na awo ntoatoaso yi po no.+ 26 Bio nso, sɛnea ɛyɛe wɔ Noa nna no mu no,+ saa ara na ɛbɛyɛ wɔ onipa Ba no nna no nso mu:+ 27 na wodidii, wɔnomee, mmarima warewaree, wɔde mmea memaa aware, kosii da a Noa kɔɔ adaka no mu.+ Na Nsuyiri no ba bɛsɛee wɔn nyinaa.+ 28 Afei nso, Lot+ nna no mu no, wodidii, wɔnomee, wɔtɔe, wɔtɔnee, woduae, wosisii adan. 29 Na da a Lot fii Sodom no, ogya ne sɔfe* tɔ fii soro bɛsɛee wɔn nyinaa.+ 30 Saa ara na ɛbɛyɛ, ɛda a onipa Ba no beyi ne ho adi no.+ 31 “Saa da no, mma onipa a ɔwɔ ɔdan atifi a ne nneɛma wɔ fi no nnsi fam mmmɛfa, na onipa a ɔwɔ afuw mu no, mma ɔno nso nnsan mmmɛfa nneɛma a ɛwɔ akyi no. 32 Monkae Lot yere no.+ 33 Obiara a ɔbɛyɛ sɛ ɔbɛkora ne nkwa* so no, ebefi ne nsa, na obiara a ɔbɛhwere ne nkwa no, ɔbɛkora so.+ 34 Mereka akyerɛ mo sɛ, saa anadwo no nnipa baanu bɛda mpa baako so; wɔbɛfa baako akɔ, na wɔagyaw ɔbaako.+ 35 Mmea baanu bɛyam ade wɔ ɔbo koro so; wɔbɛfa ɔbaako akɔ na wɔagyaw ɔbaako.” 36 *—— 37 Enti wobisaa no sɛ: “Awurade, ɛhe?” Ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Nea afunu wɔ no, ɛhɔ ara nso na akɔre bɛboa wɔn ho ano.”+
^ Anaa “sikamino dua.”
^ Anaa “wɔn ho fii.”
^ Anaa “wɔn ho fii?”
^ Anaa “wɔ mo mu.”